Ilay Mandrakizay | Fiangonan'Andriamanitra an'izao tontolo izao Suisse - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Mety ny miady amin'ny fomba fijerin'ny Baiboly hoe telo izay iray Andriamanitra - telo amin'ny iray ary telo amin'ny telo. Tsy tokony ho gaga raha maninona ny Kristianina maro no miantso ny tsiambaratelo ho an'ny Trinite. Na dia ny apostoly Paoly aza nanoratra hoe: "Satria tsy maintsy miaiky ny tsirairay fa lehibe ny tsiambaratelon'ny finoana" (1 Timoty 3,16).
Saingy na inona na inona fahaizanao momba ny fampianarana momba ny Andriamanitra telo izay iray, dia azonao atao ny mahazo antoka tsara hoe: Ny Triune Andriamanitra dia afaka mampiditra anao amin'ny firesahana mahafinaritra amin'ny fiainan'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
Tsy misy andriamanitra telo, fa iray ihany, ary io Andriamanitra, ilay tena Andriamanitra tokana, andriamanitra ny Baiboly, dia ny Ray, Zanaka ary Fanahy Masina. Ny raim-pianakaviana, ny zanakalahy ary ny Fanahy Masina dia samy misy, ary afaka milaza, izany hoe, ny fiainana izay nozarain'izy ireo dia mifamatotra tanteraka. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy misy izany na iray aza niarahana tamin'ny ray sy ny Fanahy Masina. Ary tsy misy Fanahy Masina manasaraka ny ray sy ny zanakalahy.
Midika izany hoe: raha Raha ao amin'i Kristy ianao dia tafiditra ao amin'ny fiarahana sy fifaliana amin'ny fiainan'ny Andriamanitra Telo. Midika izany fa eken'ny Raiko ianao ary manana fiarahanao aminao, tahaka an'i Jesosy. Midika izany fa ny fitiavana nasehon Andriamanitra indray mandeha sy ho an'ny rehetra tao amin'ny Fahatongavan'i Jesosy Kristy dia lehibe tahaka ny fitiavana izay nateraky ny Ray hatrany - ary hanana anao lalandava ho anao.
Midika izany fa nanambara Andriamanitra fa ao amin'i Kristy ianao, satria tafiditra ao aminy ianao, ka manan-danja ianao. Izany no mahatonga ny fiainana kristiana rehetra momba ny fitiavana - fitiavan'Andriamanitra anao sy ny fitiavan'Andriamanitra ao aminao.
Hoy i Jesosy: "Ho fantatry ny rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia" (Jaona 13,35). Rehefa ao amin'i Kristy ianao dia tia ny hafa satria ny Ray sy ny Zanaka mitoetra ao aminao amin'ny alalan'ny Fanahy Masina. Ao amin'i Kristy ianao dia afaka amin'ny tahotra, ny avonavona ary ny fankahalana izay manakana anao tsy hankafy ny fiainana an'Andriamanitra - ary afaka ny hitia amin'ny hafa ny fomba itiavan'Andriamanitra anao.
Ny ray sy ny zanakalahy ary ny Fanahy Masina dia iray, izay midika fa tsy misy asa avy amin'ny Ray tsy fihevitry ny Zanaka sy ny Fanahy Masina.
Ohatra, ny famonjena antsika dia avy amin'ny sitrapon'ny Ray tsy miova, izay manolo-tena hatrany hampiditra antsika amin'ny fifaliana sy amin'ny fiarahana amin'ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Nalefan'ilay raim-pianakaviana ilay zanaka, izay tonga olombelona ho antsika - teraka izy, velona, ​​maty, natsangana tamin'ny maty, ary avy eo dia nanakatra ny lanitra teo an-kavanan'ny ray ho Tompo, Mpanavotra sy Mpanelanelana taorian'ny nanolorany antsika. Nanadio ny ota izy ireo. Ary ny Fanahy Masina dia nirahina hanamasina sy hahavita ny Fiangonana amin'ny fiainana mandrakizay.
Midika izany fa ny famonjena anao dia vokatry mivantana ny fitiavana sy herin'ny Ray mahatoky mandrakariva, izay noporofoin'i Jesosy Kristy ary nohamafisin'ny Fanahy Masina. Tsy ny finoanao no mamonjy anao. Andriamanitra irery - Ray, Zanaka ary Fanahy Masina - Izy no mamonjy anao. Ary Andriamanitra manome anao finoana ho toy ny fanomezana mba hanokatra ny masonao amin'ny fahamarinan'ny toetrany - ary ianao tahaka ny zanaka malalany.